Gabar u dhalatay Soomaaliya oo garsoore ka ah England, rajadeeda, garsooraha ay ku dayato & sida ay uga soo baxdo shaqadaan adag (Sawirro) - Hablaha Media Network
Gabar u dhalatay Soomaaliya oo garsoore ka ah England, rajadeeda, garsooraha ay ku dayato & sida ay uga soo baxdo shaqadaan adag (Sawirro)
HMN:-waa gabar kasoo jeeda dalkeena Soomaaliya taasoo ah garsoore, waxayna si aad ah usoo jiidatay dareenka shaqsi kasta oo xiiseeya kubadda cagta kuna sugan Britain marka laga hadlayo awooddeeda ay u leedahay inay garsoorto kubadda cagta.
Jim White oo ah joornaaliiste ka howlgala wargeyska caanka ah ee Daily Telegraph ayaana maqaal dheer ka qoray nolosha gabadhaan iyo shaqadeeda cajiibka ah.
Jawahir Jewels ayaa tiri iyadoo qosleysa: “Waan jeclahay kubadda cagta, mararka qaar ayaa laga yaabaa inaan u sheego ciyaartoyda aan ciyaarta u garsoorayo inaan ahay garsoorahooda, xitaa shan jeer ayaan u sheegaa mararka qaar anigoo ku dhahaya ‘Waxaa ahay garsoorahaaga’. Waxayna igu dhahaan ‘Adigu ma dhexdhexaadin doontid ciyaaraha nuucaan ah marka garsoore sax ah la helo.
“Waxaan ku dhahaa iyaga ‘Iga raalli noqda, ha i xukumina inta aad arkeysaan anigoo ku jira shaqadeyda”. Ayey ku dartay hadalkeeda. “Waan garanayaa sida loo ciyaaro kubadda cagta, haa sidoo kale waxaan garanayaa xeerka garab dhaafka (Offside rule). Kaas ayaana ah midka ugu muhiimsan”.
Waa gabar madoow, waana Muslim, marka ay ku jirto shaqadeeda dhexdhexaadinta kubadda cagta waxay madaxa ku daboolataa qamaarkeeda. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee Football Association ayaana la filayaa inay Jawahir Jewels dhawaan u ogolaadaan inay garsoorto ciyaaraha horyaalka hablaha.
Waxay caan ku tahay magaca gaaban ee labada xaraf ah JJ, qoraaga maqaalkaan Jim White ayaa daaha ka qaaday in isaga ay soo gaartay ammaanta gabadhaan markii uu wiilkiisu kulan horyaal dhallinyarada ah kusoo ciyaaray London ciyaartaasna iyada ayaa garsoore ka aheyd. Wuxuu u sheegay inay tahay gabar shaqadeeda si heer sarre ah u qabsaneysa, ciyaarta oo dhan koontarooleysa, isha ku heysa qaabka ay ciyaartu u socoto markasta, geesiyad ah, sidoo kalena dhanka go’aan qaadashada ku wanaagsan.
Wiilka uu dhalay Jim White ayaa u sheegay aabihiis in ciyaartoydii kasoo horjeeday kooxdiisa ay muran la galeen JJ ka dib markii ay ka caroodeen go’aan kasoo horjeeday oo ay sameysay qeybtii labaad ee ciyaarta, indhaha ayey faraha ka gelinayeen, iyagoo cabanaya, wuxuuna go’aansaday inuu u tago una sheego inay dib uga degaan JJ, wuxuuna ku yiri “Fiiriya gabadhaan, waa inaad ixtiraam u muujisaan”.
Markii uu Jim White xusuusiyey dhacdadaas, JJ waxay daaha ka qaaday in aysan la yaabeyn sababtoo ah ciyaartoyda ayaa iyada ula dooda maalin kasta sida garsooreyaasha caadiga ah ee kubadda cagta.
Joornaaliistahaan weyn ayaana gabadhaan la kulmay xilli ay dhexdhaaxdineysay ciyaar ka dhacday Dulwich Hamlet, taasoo lacagaha kasoo xarooda lagu bixinayey Waxbarasho Dhanka Kubadda Cagta ah. Kulankaasna waxaa ciyaarayey xiddigo waa weyn oo kasoo xamaashay horyaalka England Premier League sida Jamie Lawrence iyo Leon Cort, laakiin kama cabsi qabin inay dhexdhexaadiso.
JJ waa 23 sanno jir, waxaa dhalay waalidiin kasoo jeeda dalkeena Soomaaliya waxayna ku nooshahay Waqooyi Galbeed caasimadda London, waana taageere ku waalan kubadda cagta. Xilligii ay iskoolka dhiganeysay ayeyna ku dhegtay seeriga inkastoo ay baratay Cilmiga Kumbuutarka hadana waxay dooneysaa inay noqoto garsoore weyn oo kubadda cagta ah, inkastoo ay mararka qaar wajahdo aflagaado dhanka midabka ah.
Hadda waxay baraneysaa Shuruucda Garsoorka Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ee loo yaqaanno Level Six Referee Qualification. Waxay shaqeysaa iyadoo aysan la shaqeyneyn wax calanwadeyaal ah, iyada ayaana isku filan. Kuna darso ciyaartii ay garsoorto waxay ku qaadataa 35 ginni.
Markii wax laga weydiiyey garsooraha ay ku dayato waxay daaha ka qaaday inay dooneyso sida garsooraha weyn ee reer England Mark Clattenburg, kaasoo ay muuqalladiisa inta badan ka daawato mareegaha YouTube.
Halkaan hoose ka daawo sawirrada JJ oo ku jirta shaqadeeda garsoorka.